Inxanxathela Vitamin ukulungiselela "Aevit" inikezwa uma ukushoda emzimbeni izakhi zalo eziyinhloko. Naphezu igama sasivumela engalimazi, kusebenza emithini, futhi ngenxa yalokho kufanele kuthathwe kuphela ngokulandela isincomo onguchwepheshe. Ukulungiswa kuhlanganisa ezibalulekile ezimbili Vitamin fat-encibilikayo (A no-E). Eyokuqala yalezi kubalulekile ukusebenza ngendlela efanele uhlelo ezibukwayo. Ngaphezu kwalokho, uvithamini A nethonya elihle isikhumba futhi kuyasiza ukuba ukhiphe ubuthi.
Uphiko zomuthi yesibili - -alpha-tocopherol acetate - kuyinto antioxidant enamandla. Ngosizo lwawo kwesejwayelekile capillary kwegazi, kanye nezinye izinqubo eziningi emzimbeni. Ubizwa kangcono eyaziwa ngokuthi Vitamin E. Yiqiniso, kokubili izingxenye zomuthi zikhona ukudla okuthile. Indoda ithola nabo ukusetshenziswa of nati, zemifino amafutha, inhlanzi, imifino kanye nezithelo. Nokho, kunezimo lapho amuncwa wumzimba noma ingafiki eziningi enganele. Kuzo zombili lezi zimo kuziwa izidakamizwa wokutakula "Aevit", okuyiwona iqondiswa ngomlomo noma ngisho ujove esicutshini. Ngaphambi ukusetshenziswa kwaso, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi azikho Izimo.
Kuyini ewusizo "Aevit"
Umuthi ngokuvamile iqondiswa iziguli okuyinto izingxenye zalo kudingeka ngemithamo kuqhathaniswa eliphezulu. Ikakhulukazi le osebenza ku psoriasis, lupus nezinye izifo ezithize dermatological. Abantu ne atherosclerotic izilonda semithambo kanye kahle kwegazi futhi inikeza nomfanekiso ukulungiselela "Aevitum". Kuyini futhi ebekiwe kaningi. Ngaphezu kwalokho, kuyasiza ukuqeda ezinye izinkinga zamehlo. Zamehlo A no-E - amavithamini abalulekile adingekayo ukuze kusebenze kahle le-optic nerve futhi igazi emithanjeni yakhe. Nomuthi "Aevit" nayo iyadingeka eziningi izinkinga zesisu, lapho okufakile yemvelo ku umzimba izakhi nzima, iziyaluyalu sezinzwa, ukukhathala kwesisindo.
Izinkinga uqhubeke isikhumba, izinzipho kanye izinwele njalo ngokwanele ngenxa yokuswela amavithamini A no E. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi isixazululo nakho kungase kube izidakamizwa "Aevit", okuyiwona wona futhi kudle, kodwa njengenhlangano agent yangaphandle. Beauticians ngokuvamile engamiswanga ukwelashwa izidakamizwa (ngaphandle ezingavamile). Ngakho-ke, abazincomayo ukudla nge wokuqukethwe lelisetulu izingxenye ezibalulekile noma amalungiselelo belulekwa ukusetshenziswa yangaphandle. Kungaba okhilimu ahlukahlukene, buso, serums, equkethe amavithamini, wathenga ngomumo eyenziwe noma wadala ekhaya kusuka imikhiqizo yemvelo. Imikhiqizo izinwele, ubuso nomzimba njalo ngokwanele kunconywa ukwengeza imithi "Aevit". Yini capsule lapho izidakamizwa ihlabekile ngenaliti, ephoqa amanoni-like izidakamizwa dropwise. Ngeshwa, umsebenzi kuyinto ngempela enzima, ngakho kungcono kakhulu ukusebenzisa i-ukulungiselela ukusetshenziswa esicutshini (edayiswa izitsha eziyisikhombisa ewuketshezi).
Ezimweni eziningi, lapho zaphathwa ngendlela efanele, kanye nokusetshenziswa kwemithi "Aevit" akusho izinkinga. Nokho, kuyinto ukungabekezeleli ngabanye, nokungezwani komzimba nezinto kanye ukweqisa izidakamizwa. Lesi sakamuva, njengoba umthetho, obonakaliswe emathunjini neziyaluyalu, ikhanda, kukhuphuke blood pressure kanye ukozela. Kuyadingeka ukuba akhumbule ukuthi "Aevit" ngokuqinile contraindicated ngesikhathi sokukhulelwa (nakuba ezingeni lokuhlela, futhi ngezinye izikhathi kubonakala ezinqunyiwe), futhi izingane ezingaphansi kweminyaka engu-18. Futhi ezigulini eziye kwadingeka isilethikusebenza noma uhlushwa sina isifo senhliziyo, kufanele kuthathwe ngokucophelela okukhulu.
Vitamin E: ukusetshenziswa value, imithelela ukuntula emzimbeni
Amavithamini "Univ Kids": yokusetshenziswa, ukwakheka, ukubuyekezwa
Imithombo vitamin K1. Kuyini ukusetshenziswa Vitamin K1
LN Tolstoy, "Leap" - indaba mayelana lokunqoba ukwesaba
Eugene Linnet - ithalente Ukrainian
I-Hotel Eri Beach Hotel 4 * (Greece / Crete): Incazelo kanye nokubuyekezwa
Niche plasterboard. Amadivayisi alula, amahle futhi zisebenza kahle
Yeka ukuthi kuyinto zokwakha of izinyo elilodwa ezibhedlela zesimanje
Meaning of igama anise, umsuka waso nokwanda izici
Krupa ukolo ogazingiwe: iresiphi
Lake, ngokuhlanganisa simiso: "Ziyisihlanu Lakes", Omsk Isifunda: incazelo, ukuzilibazisa, ukubuyekezwa